Mhando dzakakurumbira dzembatatisi: "nyeredzi" dzemwaka wa2020 - "Potato System" magazini
Pachikumbaridzo chematsutso, pane nguva shoma yasara vasati vadyara, uye vazhinji varimisi vebatatisi vakatosarudza kuti ndevapi mhando dzavachabheja pane gore rino. Izvo zviri mukuda kukuru Panguva ino, isu takabvunza varimi vekurima kuti vaudze Andrei Kiselev, mukuru wedunhu rePotato Mbeu yeAgroAlliance-NN LLC.
-Kusarudzwa kwemhando dzakasiyana-siyana kunogara kuri padunhu. Maodzanyemba mapurazi (Rostov Dunhu, Krasnodar Territory) vanofarira kudyara Ultra-kutanga Colombus neRed Scarlett. Munharaunda yeAstrakhan, iyo imwecheteyo Red Scarlett inoratidza mibairo yakanaka, iyo Riviera, Arizona, uye Memphis iri zvakare mukuda. Yese mhando idzi dzinokutendera kuti uwane goho rakanaka nekukurumidza sezvinobvira.
Mudunhu repakati-dunhu, varimi vanowanzodyara Gala, Vega, Colomba, Red Scarlett, Mambokadzi Anne, Madeira, Baltic Rose.
Zviri kuvimbisa here kudyara “chena” kana “tsvuku”?
- Mhuri dzeRussia dzinofarira mbatat "chena", zvinotendwa kuti zviri nani kutengwa. Paavhareji, chena-bhuru mhando dzinogara 75-80% yeiyo mutsara. Asi vhudzi rakatsvuka rinofanira kuvapo mune assortment, pane makore apo ivo ndivo "vanopfura".
Iyo yakakurumbira mhando-yakatsvukuruka mhando ndeye Red Scarlett?
- Ehe, kwemakore akati wandei mumutsara. Nechinangwa, zvichinetsa kusarudza akasiyana anogona kukwikwidzana nawo mune zvese. Kunyangwe paine sarudzo dzinonakidza pamusika, chokwadi. Kune izvo zvato nyorwa, ini ndingasarudza Memphis, haina kutanga seRed Scarlett, asi ine gohwo rakawanda kwazvo, kusanaya kwemvura, uye yakakodzera pakuchengetedza kwenguva yakareba. Uye kunze kweizvozvo, inokwezva chaizvo kune vatengi - ichi mbatatisi ine zvinyoronyoro tubers uye yakajeka ganda ganda.
Ini ndinocherechedzawo Baltic Rose - inozviratidza chaizvo mumunda, yakakodzera kushamba, uye ine mukana wese wekupinda muboka revatungamiriri vemunyika medu.
Uye zvimwe nezve chena-blond?
- Chekutanga pane zvese, iyi ndiyo Gala. Iyo akasiyana anozivikanwa zvakanyanya, akakura mumatunhu mazhinji. Zvichienderana nehunyanzvi hwekurima zvinopa gohwo remhando yepamusoro. Tongai iwe pachako: kana avhareji mutengo wemusika mbatatisi uri 8 rubles / kg, ipapo kuna Gala vanopa 9-10 rubles / kg. Vega idiki zvishoma inozivikanwa, iyo yakawanda-yakagarwa kusanaya kwemvura kushivirira zvakasiyana.
Madeira inonakidza kwazvo: yepakati-yekutanga mbesa dzakasiyana, dzakanaka kwazvo - tubers dzakapenya, dzakaringana oval - yakakodzera kushamba.
Uye zvechokwadi, Colomba rudzi rwepakutanga hwakasiyana hunopa hunhu hunowirirana. Mbatatisi yakakodzera kushamba, inotaridzika kunge yakanaka pakupakata, inogara ichitorwa nekutengeswa necheni dzekutengesa.
Mwaka uno yaive inodziya zvakanyanya nguva yechando, nyanzvi zhinji dzinoti tinofanirwa kugadzirira kupinda kwehuswa nezvirwere. Chinhu ichi chinofanira kucherechedzwa here pakusarudza mhando?
- Asi, iwe unofanirwa kutarisisa zvakanyanya kune mhando yembeu yembeu, kana zvisina kudaro zvakanyanya kuoma kutarira pamhedzisiro yakanaka chero mwaka.
Tags: VegaGalaColomboMadeiraTsvuku tsvukumbatatisi
Mbamba mbatatisi pamusika weUkraine ichaonekwa muhafu yekutanga yaApril
Ryazan chirimwa "Doshirak" zvazvino